Ma rabtaa inaad joojiso Spam? Khabiir ku xeeldheer wuxuu qeexayaa Talooyin ku saabsan sida loo xakameyn karo Spam Filters
Marka ay timaado suuq geynta internetka iyo hawlaha kale, waxaa muhiim ah in la ururiyo dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ka hor inta aan la fulin hawlaha muhiimka ah. Waxbarashada ku saabsan weerarka internetka ayaa faa'iido u leh shirkad. Tusaale ahaan, ganacsiyadu waxay heli karaan macluumaad ku saabsan sida loo ogaado oo looga fogaado emails emaylka iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee internetka - attrezzatura palestra crossfit exercises. Farsamooyinkan sahlan ayaa ka caawin kara shirkada iyo shaqaalaheeda in ay badbaadiyaan malaayiin qiimo oo khayraad ah oo halis ugu jira dhacdooyinka weerarrada spam ee guuleysta. Waxa kale oo ay badbaadin kartaa shirkadda halista ah ee helitaanka cayayaanka iyo weerarrada isbaarada kaas oo ka dhigi kara ganacsiyada in ay lumiyaan dambiilayaal dambiilayaal ah.
Lisa Mitchell, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Semef , waxay soo gudbineysaa xog muhiim ah oo ku saabsan sida loola tacaalayo spam.
1. Cinwaanka emailka.
Cinwaanka emailka waa macluumaad ku saabsan xiriirka shakhsi ahaaneed. Waa inay ahaato qarsoodi. Xaaladda isticmaalka internetka, ha ku siinin cinwaanka emailkaaga bogga internetka ama foomka internetka oo asal ahaan iyo kalsoonidu tahay su'aal. Spammers intooda badani waxay isticmaalaan cinwaanka emailka si ay u soo diraan emayl. Haysashada cinwaankaaga amniga waxay ku hayaan hal talaabo oo ay kugu soo gaari karaan. Sidoo kale waa inaadan furin waraaqaha boostada ee spam emaylka. Waxay ku jiri karaan Trojans, taas oo ay ku yeelan karto shaqooyin badan oo ku saabsan dhibka kombuyuutarka dhibbanaha.
2. Ha joojin shuruudaha..
Marka emailka spam uu leeyahay xiriiryo, waxaa muhiim ah in aan waxba laga reebin wax kasta. Ugu horreyntii, tani waa been-abuur ah maaddaama aadan ka qayb-galin abtirsiin kasta. Intaas waxaa sii dheer, geeddi-socodkani wuxuu xaqiijinayaa spamerka in cinwaanka emailka aan ansixin doono halkan in uu u isticmaalo weerarada kale ee mustaqbalka. Waxaa intaa dheer, isku-xirku wuxuu ku dari karaa hawlaha kale ee xaasidnimo ee PC-gaaga ku sameeya waxyeelo badan.
3. Marna ku dheji xidhiidhada boostada spam.
Xidhiidhyadani waxay ku jiri karaan nacas ama waxaa laga yaabaa inay hirgeliyaan xayeysiiska code ee casriga ah. Xaaladaha kale, waxay xaqiijinaysaa spamka in cinwaanka emailku uu ansax yahay. Doorashadan waxay ka dhigaysaa spamka inuu yahay bartilmaameed aan fiicnayn oo ay ku soo diri karaan qalabka farriimaha badan ama bogagga phishing. Waxaa intaa dheer, xiriiradaasi waxay ku jiri karaan qalab jajab ah kaas oo ku xiri kara daalacayaashaada kombiyuutarada fog fog, iyo helitaanka macluumaad badan oo shakhsi ah.
4. Isticmaal email u gaar ah shaqada.
Dadka leh bogag shakhsi ah, waxaa muhiim ah in aan la daabicin shaqadiisa. Ka fogaanshahani waa sababtoo ah khaniisyada iyo foojariyayaashu waxay leeyihiin qalab kuwaas oo awood u heli kara in ay emayl ka helaan bogga internetka oo ay u isticmaalaan weerarrada spam. Haddii aad u baahan tahay inaad ku darto adeegyada emailka, waxaa lagama maarmaan ah in aad adeegsato adeegyo email oo lacag la'aan ah shaqadan.
Ganacsiyo badan iyo dadku waxay ku dhacaan weeraro isdaba joog ah. Xaaladaha badankood, spam waxay ku lug leedahay isku dayga badan ee wax ku oolka ah, kuwaas oo laga yaabo inay ku guuleystaan ​​helitaanka dhibbanaha aan waxba galabsan. Natiijada, shaqaalaha iyo shirkadaha kala duwan ee shirkadku waxay u nugul yihiin weerarrada internetka iyo sidoo kale cirbadaha kale ee ay la socdaan qaybo ka mid ah ujeedooyinka xanuunsan. Waxbarashada iyo wacyigelintu waxay badbaadin kartaa shirkada waqti badan, kheyraad, sumcadda iyo walbahaarka dambiileyaasha internetka waxay keeni karaan weeraro guuleysta. Tilmaamahan, siyaabo dhowr ah oo aad ku ogaan kartid ugana fogaato spam waa la heli karaa. Laga soo bilaabo farsamooyinkan, waad ka dhigi kartaa emails kuwan, oo si habboon uga jawaab wax aan dhibaato weyn u geysan.